Generator, fitaovana ary sehatra an-tserasera
Mpanamboatra sy sehatra an-tserasera 9 an-tserasera
Alakamisy, May 28, 2015 Wednesday, May 5, 2021 Douglas Karr
The mipoaka ny indostrian'ny infografika ary izao dia mahita fitaovana vaovao manampy. Amin'izao fotoana izao, ny maso ivoho infografika dia mitaky $ 2k ka hatramin'ny $ 5k mba hikarohana, hamolavola ary hampiroborobo infographic mahafinaritra.
Ireo fitaovana ireo dia hahatonga ny fampiroboroboana ny infografikao tsy dia lafo loatra, ho mora kokoa ny famolavolana sy ny famoahana azy, ary ny sasany dia ahitana ny modely fanaovana tatitra mba hahitana hoe hatraiza ny fanaparitahana sy fampiroboroboana ny infografikao. Ny sasany amin'izy ireo dia somary tanora ka mety hiatrika bugginess vitsivitsy ianao, fa manaitra be daholo izy rehetra.
Mety hipetraka eo amin'ny antontanisa antontan'isa tena mahavariana ianao ary halaim-panahy hamoaka tabilao maromaro ho sary. Tsy izany no atao hoe infographic, fa izany no Excel. Ny infographic dia tokony hanana lohahevitra afovoany miaraka amina tanjona manokana amin'izay tadiavinao hampitaina na azavao amin'ny mpihaino anao. Ny infographic dia mandeha amin'ny alàlan'ny tantara ny mpampiasa mba hahafahan'izy ireo mitazona sy mahatakatra mora foana ilay fampahalalana. Ny infographic-nao dia tokony hifarana amin'ny karazana antso-to-hetsika hampifamatotra azy rehetra.
Easel.ly - mamorona sy mizara hevitra maso an-tserasera
IBM Many Eyes - Mahazoa hevi-baovao momba ny angonao. Zarao amin'ny olona tianao ny hevitrao. Mifanakalo hevitra amin'ireo vondron'olona an'arivony. Nitondra anao tamina orinasa iray hajaina indrindra eran'izao tontolo izao. Ary… afaka 100% izany.
table - Alao sary an-tsaina ary zarao ao anatin'ny minitra vitsy ny angonao. Tsy andoavam-bola.
Infogram - Miara-miasa amin'ireo mpamorona mahatalanjona izahay hitondra anao ireo singa sy lohahevitra tsara indrindra ho an'ny infografikao. Fidio fotsiny izay tianao hananganana anao.
Asehoy ny sary - Mamorona afisy, lahatsoratra ary famelabelaran-kevitra misy fiatraikany amin'ny fahitana. Ny tranombokin'izy ireo dia misy sary ara-tsiansa maherin'ny 3,000 sy ny fandaharana vonona amin'ny asa.
Piktochart - Piktochart dia iray amin'ireo rindrambaiko an-tserasera an-tserasera voalohany mizaha tena ny famoronana infografika. Ny fahitana azy dia ny famelana ireo tsy mpamorona / mpamorona programa hamorona infografika iraisana hampiroborobo ny antony / marika sy hampianarana amin'ny fomba mahafinaritra sy mahasarika.
Venngage - Ny Venngage dia manampy anao amin'ny famoronana sy famoahana infografika fanao, mampifandray ny mpijery anao ary manara-maso ny valiny. Venngage no sehatra famoahana infografika matanjaka indrindra hatrizay ho an'ireo mpivarotra sy mpanonta.
Visme dia fitaovana maimaimpoana ampiasaina hamoronana fampisehoana, infografika, sora-baventy ary sary mihetsika fohy. Ireo mpampiasa Visme dia afaka manomboka amin'ny preset misy modely matihanina na manomboka amin'ny canvas banga ary mamorona ny atiny, natao manokana ho an'ny filan'izy ireo.
Azonao atao mihitsy aza ny manamboatra Infographics avy amin'ny fitaovanao iOS izao miaraka amin'ny Mpamorona sary.
Fambara: mpiara-miasa amin'ireto programa ireto izahay ary mampiasa rohy mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: mamolavola infographicmoragropyinfoactiveinfogrammpamorona sarympamokatra infografikampanao sarysehatra infographictemps infografiempamorona sary iosMarketing Infographicsmpamokatra an-tseraserapiktochartfitaovanavenngagevisme
Tsy miadana vetivety ny teknolojia… Flop!
May 28, 2012 ao amin'ny 12: 56 PM
Misaotra tamin'ny lisitra. Tena ilaina tokoa izany satria ny tontolon'ny media sosialy dia mihodina haingana kokoa noho ny lahatsoratra.
May 28, 2012 ao amin'ny 6: 55 PM
Manaiky @valerie_keys:disqus ! Ary ny manakarama ekipa mpamorona mahay amin'ny infografika dia mety tsy ho tratran'ny tetibola ara-barotra maro. Ireo dia fomba tsara amin'ny fampivoarana ny anao manokana SY ny fitazonana ny fandaniana!
May 28, 2012 ao amin'ny 7: 34 PM
Namaky zavatra tena tsara aho teto.
Azo antoka fa mendrika asiana tsoratadidy hojerena indray. Gaga aho fa be dia be ny ezaka nataonao
mametraka ity karazana tranonkala fampahafantarana mahafinaritra ity.
28 Septambra 2014 à 8:53
Tsara manoratra Douglas ary misaotra an'i Visme. Raha ampiana fotsiny, ny Visme dia mihoatra ny infografika; tena mamela anao hamorona
karazana votoaty hita maso rehetra ao anatin'izany ny sary mihetsika sy ny famelabelarana.